Macluumaadka Shirkadda | Anping County Kaixuan ahama Steel Products Co., Ltd.
Anaga, isku-soo-saarka wax soo saarka iyo ganacsiga, waxaan soo saarnaa oo aan dhoofinnaa rakibida tuubbada iyo walxaha kubbadda ilaa 2002, gaar ahaan waxaan diirada saarnaa fiilooyinka birta ah ee birta ah iyo birta birta ee birta ah.
Waxaan nahay kooxda qoysku leeyahay, Mudane Yan brothers ayaa aasaasay shirkadda KX Co. (Anping county KaiXuan steel steel steel Co., Ltd.) waxayna dhistay warshadda sanadkii 2002. Jiilka walaalaha ah ee 'Yan brothers' waxay madax ka yihiin shirkadda caalamiga ah ee KX Co. horumarka, istiraatiijiyadda, iyo suuqgeynta.
Shaqaale kastaa wuxuu isku dayaa sida ugu fiican inuu sameeyo tuubbada ugu fiican iyo fureyaasha si ay ugu adeegaan una soo celiyaan macaamiisha, kuligeen waxaan dooneynaa inaan si joogto ah u sii wadno shaqadan, annagu waxaan nahay kuwa ugu xasiloon iyo alaab-qeybiyeyaasha iyo kooxda aad ku kalsoon tahay.
Ku keenida alaab tayo sare leh qiimo tartan. Laakiin, maahan sababta kaliya ee ay macaamiisha u doortaan KX Co. Iibinta wax soo saar waa hal shay; si dhakhso leh iyo gaarsiinta saxda ah waa mid kale. At KX Co., si dhakhso leh, gaarsiin lagu kalsoonaan karo iyo tayada adeegga ayaa lagu hayaa tixgelinta ugu sareysa.
Waxaan qaadanaynaa mustaqbalka: adeegga ugu habboon & degdegga, gaarsiinta saxda ah, sida ay macaamiisheennu u yimaadeen inay annaga naga filayaan: "Ka sarreeya xagga qiimaha iyo tayada!"
Badeecad wanaagsan ayaa iska hadleysa had iyo jeer waa fikradda qiimeysa.
Our warshad daboolayaa aag ka mid ah 20000 mitir murabac ah, siminnaar aqoon isweydaarsiga ah ee 5000 mitir murabac ah, aqoon isweydaarsiga machining of 5000 mitir murabac.
Waxay leedahay xarun naqshad xirfadeed iyo xarun adeeg farsamo si ay u bixiso dammaanad xirfadeed tayada wax soo saarka iyo waayo-aragnimada macaamiisha.
Awoodda wax soo saar ee bil kasta waa 100 tan. Waxaan haynaa noocyo kala duwan oo ah qalabka caaryada ee loo yaqaan SP114 iyo qalabka caaryada ee ISO4144, iwm. Qaab-dhismeedka iskiis u kobcaya oo si buuxda otomaatig u ah wuxuu leeyahay wax soo saar maalinle ah oo ka kooban 3,000 qaybood oo wax ah, taas oo saddex jeer ka badan kuwa wasakhda gacanta lagu sameeyo.
Warbixinta Sannadlaha ah ee Wareejinta
Si macaamiisha loo siiyo wax soo saarka iyo adeegyada ugu qiimaha badan.
Si loo siiyo fursadda ugu fiican ee shaqaalaha marxalad kasta oo xirfaddooda ah si ay u shaqeeyaan saacado dheer iyo adag si ay u gaaraan kartidooda ugu sareysa. Si kor loogu qaado tayada bulshada ee nolosha. In aan u dhisno warshadeena dhanka warshadaha horseedka ah si loo kordhiyo wax soosaarka loona abuuro shaqooyin cusub, abuurista helitaan sugan oo ah alaabooyin la soo saaray iyo adeegyo awood u leh in ay daboolaan baahiyaha mustaqbalka.
In loo abuuro nolol deggan oo tayo sare leh dhammaan shaqaalaha iyo qoysaskooda.
Waxaan bixinnaa badeecooyin aad ufiican iyo adeeg aan laqiyaasi karin oo, si wada jir ah u gaarsiiya macaamiisheenna qiime qiimo leh
Waxaan taageernaa heerarka ugu sarreeya ee sharafta dhammaan ficiladayada.
Waxaan si wada jir ah uga shaqeyneynaa sidii loo dabooli lahaa baahiyaha macaamiisheena iyo in laga caawiyo shirkadda inay guuleysato.
Waxaan qiimeynaa dadkeena, waxaan dhiirigelinaa horumarkooda waxaanan ku abaalmarinaa waxqabadka.
Waxaan soo bandhigeynaa rabitaan xoog leh oo aan ku guuleysan karno suuqa iyo dhinac kasta oo ganacsigeenna ah.
Waxaan noqon doonaa lammaanaha ugu qiimaha badan ee dhammaan macaamiisheenna.